जब नवीन्द्रराज जोशीले दबाई खान उठाएकाे हात बाउँडियो...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी बिहीबार बेलुका अबेर घर पुगेका थिए । दिनभर कार्यकर्ता र साँझमा पुराना सहकर्मीसँग उनको भेट भयो । खाना पनि उनले साथीहरूसँगै खाए ।
पार्टीको आगामी १४औँ महाधिवेशनमा आफू केमा उठ्दा ठीक होला भनेर नेता तथा कार्यकर्तासँग उनले राय लिइरहेका थिए । उनको सोच भने महामन्त्रीमा उठ्ने रहेछ । नेता जोशीका सहयोगी सुशान्त आचार्यले भने, ‘पछिल्लो समय दाइ महामन्त्रीमा उठ्ने तयारीका साथ कार्यकर्ता भेटघाटमा ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो ।’
तर, बिहीबार राति नेता जोशीको सोचमा एकाएक ब्रेक लाग्यो । उनको जीवनले नै भयानक टर्न लियो ।
साथीहरूबाट छुट्टिएर उनी घर पुग्दा झण्डै रातको १२ बजेको थियो । उनलाई सुगर र प्रेसरको पनि समस्या थियो नेता जोशीले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका थिए । घर पुगेर औषधि खाँदै गर्दा उनको हात बाउँडियो ।
‘मेरो हात बाउँडियो । गाह्रो भयो । मलाई छिटो अस्पताल लैजाऊ’, नेता जोशीले आत्तिँदै श्रीमती सपनालाई भने ।
नेता जोशी आफैँ गाडी चढ्न नसक्ने स्थितिमा थिए । ‘गाडीचालकले दाइलाई बोकेर गाडीमा राख्नुभएको थियो’, सुशान्तले भने ।
श्रीमती सपना, दाजु राजु र गाडीचालकले तत्कालै वीर अस्पताल पुर्‍याए । वीर अस्पताल पुग्दासम्म नेता जोशी बोलिरहेका थिए । त्यसपछि भने उनी बेहोस भए । नेता जोशीलाई वीर अस्पताल पुर्‍याउँदा रातको साढे १२ बजिसकेको थियो ।
वीरमा सीटी स्क्यान गरेर हेर्दा उनको दिमागका रगत जमेको देखियो । उनलाई राति नै नर्भिक अस्पताल रिफर गरियो । नर्भिक पुर्‍याउँदा रातको साढे ३ बजेको थियो । नर्भिक पुग्दा नेता जोशी कोमामा पुगिसकेका थिए ।
तत्काल न्युरो सर्जन डा. राजीव झाको टिमले नेता जोशीको उपचार सुरु गर्‍यो ।
‘नर्भिक आइपुग्दा नै उहाँ कोमामा हुनुहुन्थ्यो । सास फेर्न गाह्रो भएको थियो । बान्ता फोक्सोमा छिरेको थियो’, उपचारमा संलग्न नर्भिक अस्पतालका डा. झाले भने, 'अहिले स्थिर भन्न मिल्दैन । भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ । बाँच्नु हुन्न भन्ने अवस्था छैन । थोरै आशा छ ।’
डा. झाका अनुसार नेता जोशीको दिमागको बीच भागमा जमेको रगत र पानी निकाल्ने काम भइरहेको छ ।
‘दिमागको बीच भागबाट रगत र पानी निस्कने बाटो ब्लक भएको छ । पानी जमेको छ । सानो सर्जरी गरेर पानी निकाल्ने काम भएको छ । बचाउनेतर्फ लागेका छौँ’, डा. झाले भने, ‘सबैतिर फैलिएको बान्ता निकालेर क्लिन गरेका छौँ ।’
डा. झाका अनुसार नेता जोशीलाई नर्भिक पुर्‍याउँदा आँखाको नानी फुलिसकेको थियो । ‘उहाँको आँखाको नानी फुलेको थियो । आँखाको नानी फुल्नु भनेको अलमस्ट डेथ भन्ने देखिन्छ । आधा दिमागले कम नगरेको जस्तो हो’, डा. झाले भने ।
नर्भिकमा पनि सिटिस्क्यान गरेर हेर्दा नेता जोशीको दिमागको बीच भागमा रगत र पानी जमेको देखियो । उनले रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहेकाले तत्काल सर्जरी गर्न नमिल्ने भयो । अहिले नर्मल सर्जरी गरेर एक्सटर्नल भेन्ट्रिकुलर ड्रेन (ईभीडी) राखिएको डा. झाले बताए ।
‘ड्रेन राखेपछि १३० एमएल पानी निस्किसकेको छ’, डा. झाले भने, ‘रक्तचाप कम भएकाले रक्तचाप बढ्ने औषधि दिइएको छ ।’
नेता जोशीलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको उनले बताए । ‘हामीले भेन्टिलेटरमा नचल्नुहोस्, नखोक्नुहोस् भनेर राखेका छौँ’, उनले भने, ‘खोक्नुभयो, चल्नुभयो भने रक्तश्राव हुन सक्छ । यो अवस्था एकदमै जटिल अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा १०० मा ६० प्रतिशतको मृत्यु नै हुन्छ । बचाउन सक्ने सम्भावना ३० प्रतिशत हुन्छ ।’
२०७३ सालमा नेता जोशी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उद्योगमन्त्री बनेका थिए । पञ्चायतकालमा नेविसंघको महामन्त्री बनेका थिए ।
उनी काठमाडौंको उपमेयरसमेत बनिसकेका थिए । गत संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं ८ मा तत्कालीन एमालेका नेता जीवनराम श्रेष्ठसँग जोशी पराजित भएका थिए ।
अस्पतालमा नेता तथा कार्यकर्ताको भीड
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा. मीनेन्द्र रिजाललगायतका नेताहरू अस्पताल पुगेर जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । जोशी अस्पताल भर्ना भएपछि अस्पतालमा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको भीड लागेको छ ।
कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको शल्यक्रिया गरियो, स्वास्थ्य स्थिर
कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात, शल्यक्रियाको तयारी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १४, २०७७, १८:३०:००